Shoutcart: सामाजिक मिडिया प्रभावकारीहरूबाट Shoutouts किन्नको लागि एक सरल तरिका | Martech Zone
डिजिटल च्यानलहरू द्रुत दरमा बढ्दै जान्छ, बजारकर्ताहरूका लागि सबै ठाउँमा चुनौतीहरू छन् किनभने उनीहरूले आफ्ना उत्पादनहरू र सेवाहरूलाई अनलाइन प्रवर्द्धन गर्ने र कहाँ प्रचार गर्ने भन्ने निर्णय गर्छन्। जब तपाइँ नयाँ दर्शकहरूमा पुग्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ उद्योग प्रकाशनहरू र खोज परिणामहरू जस्ता परम्परागत डिजिटल च्यानलहरू छन् ... तर त्यहाँ पनि छन् प्रभावकारी.
प्रभावकारी मार्केटिङ लोकप्रियतामा बढ्दै गइरहेको छ किनभने प्रभावकारीहरूले ध्यानपूर्वक आफ्ना दर्शकहरू र अनुयायीहरूलाई समयको साथ बढाएका छन्। तिनीहरूका श्रोताहरू तिनीहरू र तिनीहरूले टेबलमा ल्याउने उत्पादनहरूमा विश्वास गर्न बढेका छन्। यो यसको नकारात्मक बिना छैन, यद्यपि।
धेरै प्रभावकारी केवल एक ठूलो अनुयायी भएका व्यक्तिहरू हुन् ... तर तिनीहरूको संख्यामा सधैं अधिकार हुँदैन। म आफैलाई त्यो स्तम्भमा राख्छु। जब मसँग धेरै फलोअरहरू छन्, मेरा अनुयायीहरूले महसुस गर्छन् कि म उनीहरूलाई प्लेटफर्महरू देखाउँदै छु ताकि उनीहरूले थप अनुसन्धान गर्न सकून् र यो उपयुक्त छ कि भनेर हेर्नुहोस्। नतिजाको रूपमा, मैले प्रायोजक वा सम्बद्ध लिङ्कमा धेरै क्लिकहरू प्राप्त गर्न सक्छु ... तर खरिद गर्न आवश्यक छैन। म त्यससँग ठीक छु, र म प्रायः विज्ञापनदाताहरूसँग अगाडि हुन्छु जसले मलाई प्रभावकारी मार्केटिङ अभियानहरूको लागि सम्पर्क गर्छन्।
त्यहाँ दर्जनौं छन् प्रभावकारी विपणन त्यहाँका प्लेटफर्महरू, तिनीहरूमध्ये धेरै अभियान अनुप्रयोगहरू, विश्लेषणहरूको प्रमाण, ट्र्याकिङ लिङ्कहरू, आदिसँग धेरै जटिल छन्। एक प्रभावकारीको रूपमा, म प्रायः यी अनुरोधहरू छोड्छु किनभने कम्पनीसँग आवेदन गर्न र काम गर्न लाग्ने समय तिनीहरूको राजस्वको लायक छैन। एक सफल अभियानको लागि प्रस्ताव गर्दै। Shoutcart एकदम विपरित छ... केवल प्रभावकारीहरू फेला पार्नुहोस्, तपाईंको चिल्लाहटको लागि भुक्तान गर्नुहोस्, र परिणामहरू अवलोकन गर्नुहोस्। Shoutcart ले निम्न सुविधाहरू र फाइदाहरू प्रदान गर्दछ:
स्केलेबल अभियानहरू - Shoutcart ले एकै पटक धेरै प्रभावकारीहरूबाट शाउटआउटहरू अर्डर गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ। थोरै डलर जति कम र एक पटकमा $10k भन्दा माथि shoutouts किन्नुहोस्।
अनुयायी जनसांख्यिकी - अनुयायीहरूलाई भाषा, देश, उमेर, लिङ्ग र लिङ्गद्वारा फिल्टर गर्नुहोस् जसले तपाइँलाई तपाइँको लक्षित दर्शकहरूसँग मेल खाने प्रभावकारीहरू छनौट गर्न अनुमति दिन्छ।
ट्र्याकिंग र मेट्रिक्स - पोस्ट ट्र्याकिङ र तथ्याङ्कहरू सबै अभियानहरूका लागि उपलब्ध छन्, कुन प्रभावकारीले सबैभन्दा बढी ROI ल्याउँछ पत्ता लगाउनुहोस्, र आफ्नो बजेट बर्बाद नगर्नुहोस्।
तपाईको बकको लागि ठूलो धमाका - प्रभावकारी मार्केटिङ सस्तो र परम्परागत स्थानहरू भन्दा बढी प्रामाणिक छ! तपाईं शाउटकार्टमा मात्र $१० बाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ!
दैनिक लेखा परीक्षण - शाउटकार्टले हाम्रा प्रभावकारहरूलाई दैनिक अडिट गर्दछ ताकि परिणामहरू अधिकतम बनाउनको लागि तपाईं कससँग काम गर्नुहुन्छ भन्ने बारे पारदर्शी जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ!
Shoutcart मा Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, र Facebook बाट प्रभावकारीहरू समावेश छन्।
तपाइँको पहिलो Shoutcart अभियान कसरी सुरु गर्ने
बिक्री कलहरू र सम्झौताहरूको लागि आवश्यक पर्दैन, Shoutcart मूलतया प्रभावकारी शाउटआउटहरू किन्नको लागि एक अनलाइन स्टोर हो। यहाँ कसरी सुरु गर्ने हो:
तपाइँका प्रभावकारीहरू पत्ता लगाउनुहोस् - Shoutcart मा हजारौं प्रभावकारीहरू मार्फत ब्राउज गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईंको आला वा प्रस्तावसँग मिल्ने केही छान्नुहोस्। तपाइँ श्रेणी, दर्शक आकार, अनुयायी जनसांख्यिकी वा केवल किवर्ड द्वारा खोजी गर्न सक्नुहुन्छ।
भाडोमा हाल - उत्कृष्ट प्रभावकारहरू छनोट गरेपछि, तिनीहरूलाई तपाईंको कार्टमा थप्नुहोस् र अर्डर सिर्जना गर्न सुरु गर्नुहोस्!
तपाईंको अर्डर सिर्जना गर्नुहोस् - एक साधारण फारम भर्नुहोस् र पोस्ट गर्न प्रभावकारीहरूको लागि छवि/भिडियो अपलोड गर्नुहोस्। अर्डर क्याप्शनमा तपाईंको प्रयोगकर्ता नाम वा लिङ्क समावेश गर्नुहोस्, ताकि दर्शकहरूलाई तपाईंको प्रस्तावमा कसरी पुग्ने भन्ने थाहा हुन्छ।
तालिका र भुक्तानी गर्नुहोस् - आफ्नो मनपर्ने आवाजको समय छान्नुहोस्, र अर्डरको लागि भुक्तान गर्नुहोस्। प्रभावकारीहरूलाई तपाइँको अर्डर प्रकाशित गर्न 72 घण्टा सम्म अनुमति दिनुहोस् तर चिन्ता नगर्नुहोस्, प्रभावकारीहरूले तपाइँको मनपर्ने समय भन्दा पहिले पोस्ट गर्दैनन्।
एक्सपोजर प्राप्त गर्नुहोस् - तपाईंको शाउटआउटको लागि भुक्तान गरिसकेपछि र समय तालिका तय गरेपछि, तपाईंले छान्नुभएका प्रभावकारहरूबाट पोस्ट प्राप्त गर्नुहुनेछ! यो सजिलो छ!
Shoutcart मा प्रभावकारी ब्राउज गर्नुहोस्
खुलासा: म एक सम्बद्ध छु Shoutcart र तिनीहरूको नेटवर्कमा प्रभावकारी पनि।
टैग: प्रभावकारी मार्केटिङ अभियानहरू किन्नुहोस्shoutouts किन्नुहोस्सामाजिक मिडिया पोष्टहरू किन्नुहोस्फेसबुकफेसबुक प्रभावकारीप्रभावकारी मार्केटिङ अभियानहरूप्रभावकारी विपणनप्रभावकारी मार्केटिंग प्लेटफर्मइन्स्टाग्रामइन्स्टाग्राम प्रभावहरूshoutcartटिक्टक प्रभावकहरूtwitterYouTubeयूट्यूब प्रभावकारीहरू